Ny fizarana kely Linux tsara indrindra | Avy amin'ny Linux
Ny fizarana mini-Linux tsara indrindra
Mini-distro ho an'ny ekipa misy loharanon-karenan'ny fitaovana voafetra na kely fa ny manangana OS Miorina amin'ny Linux, misy karazany lehibe hisafidianana sy hizaha toetra azy, eto dia milaza ny sasany aho.
1 Inona no atao hoe fizarana kely Linux?
Inona no atao hoe fizarana kely Linux?
Ny fitsinjaram-pahefana Linux dia karazany iray amin'io rafitra io izay mikendry ny hampiditra rafitra miasa feno ao anaty trano fitehirizana entana tsy misy fatra toa ny kapila.
Ity karazan-tsinjara ity dia ahafahantsika miasa ao anatin'ny tontolo Linux saika feno amin'ny alàlan'ny fanombohana avy amin'ny floppy disk na fanalahidy USB ary tsy ampiasana ilay hard disk mety hananan'ny solosaina, ka hialana amin'ny fitsabatsabahana amin'ny rafitra apetraka amin'ny solosaina. Ary noho ny fihenan'ny loharanom-bolany, ny tena manakiana indrindra dia matetika ny RAM, izay amin'ny tranga maro dia tsy maintsy misy 8 Mb RAM, ka saika ny solosaina rehetra dia mendrika ny hampiasana azy.
Asa ambany indrindra: eo anelanelan'ny 1Mb sy 50Mb
Fampiasana loharanon-karena farafahakeliny: RAM 4-8 Mb sy mpanam-pahaizana i386
Fampiasana RAM ho toy ny rafitra fisie: / dev / ram-n
Tsy mila kapila mafy matetika izy ireo:
Matetika avelan'izy ireo hifandray amin'ny tambajotra ny fitaovana ary ampidirina ao ny mpanjifa ary indraindray ny mpizara serivisy toy ny ftp, http, telnet na hafa
Fametrahana avy amin'ny MS-DOS, GNU / Linux, na tsy mila rafitra fandidiana toy ny rafitra LiveCD.
Fametrahana tsotra be.
Disks mpanampy hanampy fanampiny Functional.
Ny fampiasana RAM ho fitaovana fitehirizana dia mahatonga ny rafitra haingam-pandeha hiasa, satria ny fitahirizana amin'ny RAM dia haingana kokoa noho ny fitahirizana fitaovana hafa. Saingy io fampiasana io no matetika manery ny RAM an'ny PC hihoatra ny 4Mb RAM, raha tsy izany dia tsy manimba be ny fampiasana ny rafitra. Ankoatry ny fitaovana fitahirizana "/ dev / ram-n" dia takiana ihany koa ny fahatsiarovana ho an'ny kernel an'ny rafitra fiasa sy ho an'ireo rindranasa ampiasaina. Ny majika fandidiana tsy misy kapila mafy dia mifototra amin'ny fampiasana RAM ho solon'ny kapila mafy sy kapila.
Ity manaraka ity dia lisitr'ireo fizarana Linux hamintinana ireo milina maoderina tsy dia maoderina, izay tsy ahafahana mankafy fizarana maoderina 100%, noho ny fetran'ny fitaovana.
Antomika: Fitsinjarana kely miorina amin'ny Debian vaovao ho an'ireo mpampiasa vao manomboka ary mora apetraka.
Austrumi: Fitsinjarana mivantana iray hafa misy habe kely, zara raha 50MB. Tsy malaza, fa tsy ambany kalitao amin'izany. Miorina, toy ny ankamaroany, amin'ny Slackware. Miasa tsara amin'ny Pentium ary amin'ny solosaina any aoriana. Lafiny sary malina, miaraka amin'ny Enlightenment.
BasicLinux: Mini-fizarana natao manokana hamerenana ny 486 lany andro. Miorina amin'ny Slackware dia mihazakazaka mivantana avy ao amin'ny floppy disk mampiasa RAM izy io.
Brutalware: Fitsinjarana kely ho an'ny fitantanana tambajotra amin'ny TCP / IP
Coyote Linux: Variant of Linux Router Project, miainga avy ao anaty kapila iray ary mampody ilay PC taloha izay notahirizinao tao anaty lalimoanao ho router afaka mampifandray ny tamba-jotra eo an-toerana amin'ny Internet.
Damn Small Linux: fitsinjarana mini amin'ny cd mivantana izay noho ny habeny, dia afaka miasa ho toy ny distro famonjena na ampiasaina amin'ny masinina izay tsy manana hery fanodinana kely.
DeLi Linux: Acronym ho an'ny Desktop Light Linux, afaka miasa tsara amin'ny terminal 486 misy RAM 16MB. Ny tontolon'ny sary XFree dia miasa ary avy amin'ny Slackware.
FloppyFW: Ity fizarana kely ity dia ahafahanao mampiditra router mijanona miaraka amina fiasan'ny firewall.
microLINUX_vem: fizarana kely fanabeazana GNU / Linux amin'ny teny Espaniôla, amin'ny fomba maodely, voafono ao anaty kapila flopy 1.44 Mbyte na havoana avy eo am-baravarankely Windows system.
MoviX: Fizarana mini-haino aman-jery azo soloina tena avy amin'ny CD izay milalao karazana rakitra multimedia amin'ny MPlayer.
muLinux: Mini-fizarana apetraka amin'ny kapila. Iray amin'ireo fizarana kely indrindra izy io, mifamatotra mora foana amin'ny solosaina taloha.
Puppy linux: Fitsinjarana mivantana izy io, mety hasiana mametraka azy amin'ny kapila mangarahara. Mila RAM kely izany ary mirona hihazakazaka amin'ny solosaina taloha. Manome ny roa tonta Fvwm95 sy JWM.
SliTaz Linux: natao hihazakazaka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny RAM 128 Mb. Izy io dia manana CD 30 Mb sy 80 Mb amin'ny kapila mafy rehefa tafapetraka. Avy amin'ny 16 Mb an'ny RAM dia manana ny mpitantana varavarankely JWM izy (ao amin'ny kinova fandrahoana azy dia LXDE).
Linux kely: Mini-layout natao hampiasaina amin'ny solosaina efa lany andro.
Tiny Core Linux: Tiny Core Linux dia birao Linux kely indrindra (10MB) kely indrindra. Miorina amin'ny kernel Linux 2.6, BusyBox, kely X, FLTK GUI ary mpitantana varavarankely flwm, mihazakazaka ao anaty fitadidiana.
Tinyme: TinyMe dia fizarana bitika miorina amin'ny Linux. Misy izy hanamorana ny fametrahana ny Unity Linux amin'ny solosaina taloha, hanomezana fametrahana kely ho an'ny mpamorona, ary hanolorana fametrahana haingana ny Linux izay ny tena ilaina ihany no ilaina.
Tombsrtbt: Tomsbsrtbt dia rafitra mpamonjy voina amin'ny kapila iray tokana.
Trinux: Mini-fizarana miompana amin'ny fitantanana sy ny fitiliana ny tambajotra.
Linux Vector: Miorina amin'ny Slackware dia tokony handeha tsara amin'ny 32MB RAM sy kapila mafy 1GB. Tontolo iainana sary XFCE / KDE, miankina amin'ny tranga. Misy kinova livecd izay tsy mila fametrahana.
ZenWalk Linux: MiniSlack fantatra taloha, tsotra sy feno ity fizarana miorina amin'ny Slackware ity. Natao ho an'ny solosaina mahafeno ireto fepetra takiana farany ambany ireto: Pentium III sy 128 Mb RAM.
Lisitr'ireo distro mini Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ny fizarana mini-Linux tsara indrindra
Sebastian Varela sary placeholder dia hoy izy:
Tsara! hamelombelona ny masinanao taloha
Valiny tamin'i Sebastian Varela
iray amin'ireo tsara indrindra dia ny TinyCore. Mahavariana ny fomba fahafantarany ny fitaovana rehetra misy eo am-pelatanany ary misy interface-tsary ary eo amboniny dia manana tahiry isan-karazany. mahatonga ny PC hiasa tahaka ny vaovao. misy koa ny kinova vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny WIFI ary misy safidy interface interface isan-karazany (64mb fotsiny)
Paco Puig dia hoy izy:
Trinux dia antsoina hoe ubuntutrinux ankehitriny ary ny pejiny dia http://code.google.com/p/ubuntutrinux/ . Ilay napetrakao dia mitondra any amin'ny casino an-tserasera ...
Valiny tamin'i Paco Puig
Haha! Misaotra amin'ny vaovao. Mamihina! Paul.
Esparza romana dia hoy izy:
Namonjy ny aiko izy ireo noho ny nitadiavako zavatra toa an'io xD
Valiny tamin'i Roman Esparza
Sirititra ao anaty harato. dia hoy izy:
DSL dia fantsona na dia tsy hitako aza ny fomba hametrahana programa .UCI na hanampiana ireo repositories an'i Debian (azoko tsara fa afaka) ... Nanamboatra lahatsoratra momba izany aho indray mandeha (http://hayardillasenlared.blogspot.com/2011/06/instalar-damn-small-linux-en-el-disco.html)
Valio ireo Chipmunks amin'ny Internet.
Tsara vintana! Faly aho fa manampy izany
Juan jose garces garcia dia hoy izy:
Salama .. Mamporisika doudoulinux na chyme style ve ianao? Manana kahie kely misy ce sy 128Ram aho mandritra ny 4 taona…?
Valiny tamin'i Juan Jose Garces Garcia
Mahaliana sy mahaliana!
Hiezaka ny atika aho hijery izay onja =)
arahabaina tiako ho fantatra hoe iza amin'ireo kinova ireo no mamela fifandraisana birao lavitra.
Edwin Morales Z dia hoy izy:
Ampiako ireto roa ireto:
Old Slax, mamela anao hamorona Live-CD anao manokana.
New Slax - ny safidy hamoronana Live-CD anao dia tsy mbola alefa.
Valiny tamin'i Edwin Morales Z
Windows AeroSnap na Compiz Grid vokany ao Xfce